सरकारले गर्‍याे अश्लील सामग्री राख्ने २१ हजार वेबसाइट बन्द ! « News24 : Premium News Channel
सरकारले गर्‍याे अश्लील सामग्री राख्ने २१ हजार वेबसाइट बन्द !
काठमाडौँ । यौनजन्य अश्लील सामग्री राख्ने २१ हजारभन्दा बढी वेबसाइट बन्द गरिएको छ । सरकारले समाजमा बढ्दै गएकाे बलात्कारका घटना तथा यौनजन्य हिंसाका घटनालाई कम गर्ने उद्देश्यले ती वेबसाइट बन्द गरेको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म २१ हजारभन्दा बढी वेबसाइट बन्द भइसकेका छन् भने त्यस्ता प्रकृतिका अन्य वेबसाइट पनि बन्द गर्न निर्देशन दिइसकिएको छ । नेपाल टेलिकम र एनसेलबाट सञ्चालन हुने नेटवर्कबाट त्यस्ता खालका साइट पनि बन्द गरिसकिएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, अनुगमन विभागले जनाएकाे छ ।
हाल अश्लील यौनजन्य सामग्री प्रकाशन प्रसारण गर्ने एक लाखभन्दा बढी वेबसाइट रहेकाे बताइन्छ । अश्लील वेबसाइटलाई पूर्ण रुपमा बन्द गर्नका लागि कुनै पनि व्यक्तिले अश्लील साइट हेरेको खण्डमा त्यसलाई एप्समा हालेर तत्कालै बन्द गर्न सकिने प्रविधि निर्माण गर्ने तयारीमा प्राधिकरण रहेको छ ।